Fibatana fonjamby-afrika :: Samy nandrombaka medaly volamena telo i Rosina sy i Ricardo • AoRaha
Fibatana fonjamby-afrika Samy nandrombaka medaly volamena telo i Rosina sy i Ricardo
Mamiratra hatrany ireo mpibata fonjamby malagasy amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena. Nandrobaka medaly volamena telo avy, Randafiarison Rosina sy Ramiarimanana Ricardo, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy “junior”, any Oganda. Nahabata 72kg i Rosina teo amin’ny « Arraché », izay sady zava-bita tsara indrindra eto Afrika. Nahavita ny 85kg teo amin’ny « Epaulé-jeté » sy ny 157kg tamin’ny “Total olympique” ihany koa izy. Nahavita nibata ny 90kg kosa i Ricardo, sokajy latsaky ny 61kg, teo amin’ny “Arraché”, 115 kilao tamin’ny « Epaulé-jeté » ary 20 kg tamin’ny “Total olympique”.
“Vao fanindroany aho no tao amin’io sokajy latsaky ny 49 kg io. Tany amin’ny sokajy latsaky ny 45kg aho hatramin’izay, afa-tsy tamin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika tao amin’ny faritra faharoa sy tamin’ity fifaninanana ity. Henjana ireo mpifananadrina tamiko avy any Alzeria sy Oganda fa mbola mafy kokoa ny tenako”, hoy i Rosina.
Tsy lavitry ny fahazoana ny tapakila hiatrehana ny Lalao Olympika amin’ny taona 2020 ny delegasiona malagasy. Mitondra vokatra tsara ireo atleta isaky ny fifaninanana atrehiny. Efa niambozona medaly volamena telo i Rosina tamin’ireo fihaonana nikatsahana izany tapakila izany. “Fifaninanana iray sisa no handraisan’i Rosina anjara dia tokony hahazo ny tapakila amin’ny Lalao Olympika izy. Tsy hionona amin’izany anefa izahay fa hatrehana hatrany ireo fihaonana hafa”, hoy Rakotoarison Thomas, tale teknikan’ny Federasiona malagasin’ny fibatana fonjamby.
Mbola miisa telo kosa, hoy hatrany ity tale teknika ity, ireo fihaonana tokony hatrehan’i Ricardo. Mila tsara vokatra izy mba hahazoany tapakila amin’ny Lalao Olympika.
Fanokafana ny taom-pambolen-kazo Olona roa arivo sy iray alina mahery niara-dia tamin’ny Filohan’ny Repoblika
Hatsikana an-tsehatra :: Hizara tokiky ao anatin’ny “Mitsongoloka” ry Etsetra Etsetra sy i Barhone